Multi-Agri Development Association (MADA), local NGO and to promote the nature farming system in Myanmar, which will be protecting from deteriorate of agro-ecosystem especially by developing the organic agriculture group.
Multi-Agri Development Association is local NGO and idea to establish this organization was evolved since 2012 with the activities of organic technology training program.
Name of Chairman/Leader	-	U Hnin Oo
Name of Contact Person	-	Dr. Myint Lwin
MADA isanon-profit, non-political and non-government organization. It is one of active work groups operating nature farming related capacity building training and services for rural development and environmental conservation. At the preliminary stage of organization establishment, by giving practicingalocal networking strategy with prompt and flexible management system with adaptable tactic to suit current local situation.
Foods are one of the most important for human being and to support the energy for their daily functions. As the population increase and foods production need to be increased. However, the agriculture growing areas are becoming less and less in nowaday. Therefore, to get the higher yields are very important factor andalot of chemical products are becoming influence in agriculture systems. Many farmers relied mainly on chemical commodities such as fertilizer, pesticides, fungicides, bactericides, etc. to obtain higher yields and to get the sound products. As the result of extremely used of chemical, not only can affect the human health but also can cause the depletion of soil fertility and also lead to the environmental hazard. Thus it is important to formulate agricultural system, which does not destroy the natural environment. And therefore well experienced professionals who has been working at the agricultural sector & environmental conservation sector have to establish the nature farming development programs by promoting the organic agriculture and share the knowledge to rural farmers unity.
To develop nature farming technology in Myanmar
To develop rural area
To develop organic market
Its vision is to be one of lead organizations in the development of nature farming, environmental conservation and rural development.
Its mission is to conduct trainings, for the capacity building and to raise public awareness about Nature Farming, Sustainable Agriculture, Environmental Conservation and Community Development
The second is provide services in development of nature farming and environmental conservation through community participation and community development .And the last one is to develop organic market; local and International
Sustainable agriculture (by leading organic agriculture)
Community from project area
People from rural areas in Myanmar
ဘက်စုံသဘာဝ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြန့်ပွားလာစေရန်အတွက် သုတေသနလုပ်ငန်း၊ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ၊ လက်တွေ့သရုပ်ပြလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။
နည်းပညာများလက်တွေ့ဖြစ်ထွန်း အသုံးချလာနိုင်ခြင်းဖြင့် သဘာဝစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍအား ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နည်းစနစ်များဖြင့် အစားထိုးသုံးစွဲလာနိုင်စေရန်။
သဘာဝစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ထွက်ကုန်များအား ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသို့ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ပေးရန်။
ဤအသင်း၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာ့လူသားများအတွက် စားနပ်ရိက္ခာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြေရှင်းရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်။
ဘက်စုံစိုက်ပျိုးမွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း၏ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန် လျာထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။
သဘာဝစိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာပေးရေး၊ လက်တွေ့အသုံးချရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထေည်ဖော်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အပိုင်းများမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အဓိကကျသော လူ့စွမ်းအားစုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ်များ ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် လေ့လာခြင်း၊ အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်း၊ တီထွင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းနှင့်လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာများဖြင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေခံကျသော ပညာရေးနှင့် လူနေမှုဘ၀ဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရန် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
သဘာဝစိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဖြင့် လက်ငင်းနှင့် အနာဂတ်စားနပ်ရိက္ခာပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်း။
အသင်း၏လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်သွားရောက် လေ့လာကူညီမှု ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ သဘာဝစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများကို တစ်စုတစ်ဝေးတည်း တိုင်းပြည်၏ လူသားအရင်းအမြစ် အင်အားစုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖော်ဆောင်ပေးခြင်း။
သဘာဝစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံအတွင်း၌ အောင်မြင်စွာ ဖြစ်ထွန်းလာစေပြီး အနာဂတ်နိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုမည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းများ စုစည်းထားရှိပြီး လိုအပ်သလို ထုတ်ယူ၊ ဖြန့်ဝေ၊ အသုံးချနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။
သြဂဲနစ်အသိအမှတ်ပြု လုပ်လိုသော တောင်သူများကို လက်မှတ်ရအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း။
GAP စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုသူများကိုလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း။